Isisombululo esinamandla Esichazileyo kwiKhemistry
I-Glossary Glossary Inkcazo yeSombululo esisisigxina
Solution Solution Definition
Isisombululo esinombane sisisombululo apho amanzi (H 2 O) isisombululo . Kwi -equation yamakhemikhali , isimboli (aq) silandela igama lezilwanyana ukubonisa ukuba isisombululo esinamandla. Ngokomzekelo, ukuchithwa ityuwa emanzini kunokwenziwa kwamakhemikhali:
Nangona amanzi esoloko ebizwa ngokuba yi -solvent yendalo yonke , iphela ichitha izinto eziphilayo zendalo.
Imizekelo yamakhemleksi e-hydrophilic aqukethe i-acids, iziseko kunye neeriti ezininzi. Iimpawu ezingama-hydrophobic azichithi kakuhle emanzini kwaye zithenda ukuba zenze izisombululo ezinamandla. Imizekelo ibandakanya amaninzi omlambo, kuquka amafutha kunye namafutha.
Xa i-electrolytes (umzekelo, i-NaCl, i-KCl) ichithwa ngamanzi, ion ivumela isisombululo sokuqhuba umbane. I-nonelectrolytes njengoshukela nayo iyachithwa emanzini, kodwa i-molecule ihlala ingacacanga kwaye isisombululo asikho.
Isibonelo Solution Squeous
I-Cola, amanzi anetyuwa, imvula, izixazululo ze-asidi, izisombululo esisezantsi, kunye neetyulo zetyuwa ziyimimandla yezisombululo ezinamandla.
Imizekelo yesisombululo esingeyiyo isisombululo esincinci siquka naluphi na umbane ongekho amanzi. I-oyile yemifuno, i-toluene, i-acetone, i-carbon tetrachloride, kunye nezisombululo ezenziwe ngokusebenzisa ezi zixazululwano aziyizicombululo ezinomsoco. Ngokufanayo, ukuba umxube uqukethe amanzi kodwa akukho nto idibeneyo emanzini njengendlela yokusombulula isisombululo.
Umzekelo, ukuxuba isanti kunye namanzi akuvelisi isisombululo esinamandla.
I-Effect-Ion Impact Definition
I-Methyl Inkcazo (i-Methyl Group)
Idilesi echaziweyo Inkcazo
Inkcazelo yePlastiki yePlastiki
Polyprotic Acid Inkcazo
I-PPB Inkcazo kwiKhemistry (Icandelo ngeBiliyoni)
Uphawu lweMpawu zeMichiza kunye nemizekelo
Ziqhelise ekusebenziseni i-Present Perfect ngesiNgesi ngegrama
I-Quantum Physics ngokubanzi
I-Melting Point Definition
Indlela yokuhamba kwiTrailer emva kweCandelo okanye iCar
Inomic Number 3 Element Facts
Trilobites, i-Dinosaurs ye-Arthropod Family
Phezulu David Bowie Solo Iingoma zee-80s
Ngaphakathi kweTekisi yokuThuthukiswa kweSithuthuthu
Imizekelo yeZ-score Calculations
Indlela ootitshala abamele baxele ngayo ukuphathwa kakubi kwabantwana
Iprofayili ye-Vice uMongameli kaMichael "Mike" Pence
'IGrey's Anatomy' Isikhathi sesi-5: I-Synopsis epheleleyo
Liliphi uLwimi lokuKhanya?
Indlela yokufakela izikhalazo zentengiso yeLoud TV
I-Sam Houston State University Admissions
Iimpawu zeModal of Possibility for Learners
Indlela yokusebenzisa iibhanki ngokuchanekileyo kubhala
Willie Colon - Iingoma ezilungileyo
3 Imidlalo yokuPhucula i-Improv Imidlalo yokuPhucula izakhono zeActor
Izipho ezinkulu zeholide zabalandeli be-paranormal
I-Howard ye-University GPA, iSAT kunye ne-ACT Data